Jaamacadda Muqdisho oo ardydu u fariisteen imtixaankii simistarka (Sawiro) – Radio Daljir
Jaamacadda Muqdisho oo ardydu u fariisteen imtixaankii simistarka (Sawiro)
Janaayo 26, 2013 7:50 b 0
Bosaso, Jan 26 – Ardayda jaamacadda Muqdisho faraceeda magaalada Bosaso ayaa maanta u fariistay imtixaankii simistarka ee jaamacadda, ardayda oo oo gaarayaa ku dhawaad kun arday ayaa dhigta kuliyadaha kalle duwan ee jaamacadda.
Agaasimaha xafiiska maamulka ee jaamacadda Muqdisho qaybteeda magaalada Bosaso ayaa sheegay imtixaankan inuu yahay simistarka koowaad ee jaamacadda.
Waxaa ardadya jaamacadda uu u rajeeyey inay kaalimo wax ku ool ah ka galaan imtixaanka jaamacadda, jaamacadda Muqdisho ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu horeeya waxbarshada dalka Soomaaliya waxaa ay xubin ka tahay ururo caalami ah oo ay ku midaysanyihiin dalalka Muslimka, qaaradda Afrika iyo caalamka intiisa badan.
Photo by: Axmed Nuur Ibraahim
Maamulka gobolka Sool oo dadaal ugu jira joojinta xaalufka deegaanka.
Kooxda kubadda kolayga Soomaaliya oo galabta ciyaar kala hor tagi doona kooxda kolayga keenya.